Haimen Xinrong Electric Co., Ltd la aasaasay sanadkii 1999, soo saaraha xirfadle ku takhasusay cilmi, horumarka iyo wax soo saarka ee haysta laambad lagu ridayo . Waxaan ku yaalaan Liuhao Town, Haimen City, meel u dhow dekedda Shanghai, inay helaan gaadiid ku haboon. Dhamaan waxyaabaha our raacaan heerarka tayada ee caalamiga ah oo ay si weyn u mahad suuqyada kala duwan ee dunida oo dhan.
Waxaan ku siin noocyada kala duwan ee haysta laambad lagu ridayo, our haysta guluubka foornada sida caadiga ah loo isticmaalo foornada gaaska, foornada uumi saafi ah, foornada uumi, kulan nalalka foornada. Products waxaa intooda badan laga dhoofiyay si Italy, Turkey, Bariga Dhexe iyo dalalka iyo gobollada kale ee la noo tayo wanaagsan leh, qiimaha ahaaneed, kal iyo laab ah u bixinayno adeegidda macaamiisha gudaha iyo dibadda!
shaqaalaha kasta ee Shirkadda adeegta macaamiisha kasta oo adduunka oo mabaadiida: adeegga si diiran waa in ka hor, maamula tayada waa saldhigga horumarka; sumcad waa salka badbaadada. Haddii aad xiisaynayso in waxyaabaha our, waxaad nagala soo xiriiri kartaa wakhti kasta oo aan kuu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Haddii aad xiisaynayso in mid ka mid ah waxyaabaha our ama aad jeclaan lahayd si ay ugala hadlaan si kartoo, fadlan si xor ah u nala soo xiriir. Waxaan rajeynaynaa in la dhiso xiriirka ganacsi guul leh macaamiisha cusub oo dhan adduunka oo dhan ka.